Northland Foundation - McKnight Foundation
Northland Foundation waxay diiradda saareysaa dadka ku nool waqooyi-bari ee Minnesota. Waxay kobcinaysaa horumarinta ganacsiga maxaliga ah waxayna raadineysaa habab wax ku ool ah si loo wanaajiyo waaya-aragnimada koritaanka iyo korriinka weyn ee Waqooyi-bari Minnesota.
$ 5 milyan oo amaah 10 sano ah 1%; laga soo bilaabo 2011
Waxay gacan ka geysatay beesha waqooyi-bari ee Minnesota iyo hay'adaha horumarinta dhaqaalaha si ay u kobciso Barnaamijkeeda Maalgelinta Ganacsiga, iyo sidoo kale deynta dib-u-habaynta oo leh raasumaal qaali ah.
Deyntu waxay u socotaa guusha.
Tan iyo markii la xiray McKnight, Barnaamijka Maalgelinta Ganacsiga ee Northland waxay kor u qaadday awoodeeda amaahda si ay u dhisto ganacsi, u abuurto shaqooyin joogtayn qoys, iyo xoojinta dhaqaalaha gobolka. Sidoo kale, deynta la xisaabiyay waxay u oggolaatay Northland Foundation in ay ku celiso $ 144,000 sanad walba laga bilaabo bixinta dulsaaraadka ujeedka hannaanka gargaarka ah, Northland Village.
FY2015 FY2016 Metric
19 18 Amaahda la siiyo ganacsiyada degaanka
$2,500,000 $1,536,403 Deymaha loo qoondeeyey ganacsiyada degaanka
222 169 Shaqooyinka la abuuray lana sii haysto
Hantid sahlan, oo si fiican u timaadda raasamaal raaxo leh ayaa yeelan kara faa'iido bulsho oo weyn. Mararka qaarkood, maalgashiga saameynta waa in ay ku dadaalaan fududaanta iyo xawaareynta dilka.
U adeega toddoba gobol ee waqooyi-bari ee Minnesota, Northland Foundation waa mid ka mid ah lixda Aasaasiyadeedka Minnesota waxaa sameeyey McKnight sanadkii 1986. Northland waxay ku maal gashaa dadka iyo beelaha si ay u taageeraan waqooyi-bari Minnesota.
Sawirka Sawirka: Joe Rossi, oo ah madaxweyne Northland Foundation